Fanagadrana Ho An’ny Mpiasan’ny ONG ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Fanagadrana Ho An'ny Mpiasan'ny ONG ao Ejipta
Voadika ny 08 Jona 2013 18:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Français, Italiano, 日本語, English
Niteraka fahatezerana tany amin'ny tambajotra an-tserasera – sy eny amin'ny andavanandrom-piainana ny namoahana ny didy ho an'ny mpiasan'ny ONG Ejipsiana sy vahiny 43 izay hogadraina hatramin'ny dimy taona. Heverina ho fampitandremana ho an'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpampiroborobo ny demaokrasia izany.
Manazava ilay bilaogera Ejipsiana Zeinobia:
Mampalahelo izany satria mitana anjara toerana lehibe ao Ejipta ny ONG raha eo amin'ny resaka fampandrosoana ary mitana toerana amin'izany ny fanampiana ara-bola vahiny. Fa ny tena mampalahelo kokoa dia ny fanasaziana ireo mpiasa Ejipsiana ao amin'ireny ONG ireny amin'izany fomba izany.
Tsy hahita asa vetivety ireo lehilahy sy vehivavy ejipsiana ireo raha voasazy amin'ny fomba ofisialy tahaka izao.
Eny tsy adala izao tontolo izao , fantany izay nitranga sy mitranga.
Tokony ho fantatrao fa izao ny fomba famitahan'ny fitondrana teo aloha tamin'ny andron'i Mubarak, avelao ireo ONG ireo hiasa tsy misy fahazoan-dalana mba hahafahana manakatona ireo fikambanana mihoatra n tsipika mena. Izany no natao taloha tamin'ny fantona fahitalavitra tahaka ny Orbit, Dream TV ary ny Al Jazeera Mubshar Misr.
Mazava loatra fa tsara lazaina ihany fa mandeha tamin'ny lalana nandehanan'ny fitondrana Mubarak sy ny SCAF [tafika Ejipsiana] ny Mpirahalahy Miozolomana.
Dingam-pihemorana hafa indray eto Ejipta eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona izao ary tsy handrisika n olona ho tonga eto amin'ny firenena na hampiasa vola eto. Mino koa aho fa hampihemotra ny fifandraisan'i Etazonia amin'ny Mpirahalahy Miozolomana sy eo amin'ny Vondrona Eoropeana amin'ny mpirahalahy Miozolomana izao.
Milaza hevitra amim-pahatairana ny mpiserasera ao amin'ny Twitter.
Sally Sami :
@Salamander: Ankona tamin'ny fandrenesana ny didim-pitsarana ny ONG!! Tsy tokony hisy ny migadra noho ny fiasany ho ana ONG fotsiny … #NGO #ngocrackdown
Lina El Wardani :
@linawardani: Taitra sy mihorohoro tamin'ny fandrenesana ny didim-pitsarana 11 nodidiana sazy mihantona herintaona 5 ho roa taona ary 27 tsy nanatrika higadra 5 taona, ONG 4 nakatona
Bel Trew nanamarika:
@Beltrew: Ny fitsarana ny ONG [#NGO trial] dia notarihan'ny minisitra tamin'ny andron'i Mubarak teo ambany lalànan'ny #SCAF [Miaramila Ejipsiana], olo-tsotra no nenitana teny amin'ny fitsarana gz TSY ny fikambanana noho ny tsy fisoratana anarana
Ary Mona Eltahawy nanampy:
@monaeltahawy: “Rariny” (fitsarana) any #Egypt: fanagadrana ho an'ireo #ngotrial [fikambanana] heverina ho mihetsika ara-politika, fanafahana madiodio ho an'ireo olo-malaza/polisy mamono mpanao fihetsiketsehana
Mitaraina i Ghada Shahbender [ar]:
@ghadasha: Ny tena loza dia ny 99 isan-jaton'ny Ejipsiana hanaiky ny didim-pitsarana hanagadra ny mpiasan'ny ONG ary faly manembatsembana ny “fitsabahan'ny vahiny”, izay ampiroboroboina
@ghadasha:… avy amin'ny fitondrana Mubarak, ny filankevitra faratampon'ny foloalindahy [SCAF] sy ny mpiharahalahy miozolomana – izay nahazo ny fanampian'ny iraisampirenena daholo ary nangataka tamin'ny fiarahamonina iraisampirenena. Ry zareo no nampiroborobo ny hevitra momba ny “fitsabahan'ny vahiny” dia manararaotra an'iny hanaovana famoretana [ny ONG]
Iray amin'ny voampanga i Robert Becker izay nodidiana ro taona ary ny hany vahiny voampanga mbola tavela teto Ejipta nandritra ny fotoam-pitsarana, no nilaza fa noterena hanao “sesintany” izy taorian'ny filazana ny didim-pitsarana. Nisioka izy:
@rbecker51: Milamina ivelan'i #Egypt. Noho ny torohevitry ny mpisolovavako, voatery nandeha an-tsesintany tamim-pahatezerana maandra-pivoakan'ny fampakarana fitsarana. #NGOtrial
Tamin'ny sioka roa teo aloha no nanazavany:
@rbecker51: Misaotra anareo rehetra tamin'ny teny mmy avy aminareo. Eo am-pandinihana ny mety hanaovana ny fampakarana fitsarana miaraka amin'ny mpisolovavako #NGOtrial
@rbecker51: #pt Maikiry amin'ny fitazonana ny tsy fananako tsiny noho ny efa nanaovako ONG enin-taona mialoha ny tena nahatongavako teto Ejipta sy miandry ny paikam-panorona atao amin'ny fampakarana ny fitsarana #NGOtrial
Namehy i Sally Sami [ar]:
@Salamander: Miditra amin'ny andro maizina tokoa isika .. rehefa ampangaina higadra noho ny fiasany fotsiny amina ONG ny olona
Raha hijery fihetseham-po hafa, andramo ny mijery teny ifankafantarana #ngocrackdown sy #ngotrial.
Araka ny tati-baovao sy ny filazany ao amin'ny kaonty Twitter-ndry zareo dia hampakatra ny fitsarana ireo voampanga.